ဆားငန်ရေမှ ရေသန့်သို့ပြောင်းလဲခြင်း — Seadstem – Southeast Asian Digital
ဤစီမံကိန်းတွင် ကျောင်းသားများသည် ရေငန်မှ ရေချိုပြောင်းလဲရန် ရယူနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ပုံစံချ၍ အသုံးပြုရာတွင် အရည်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း အမြင်များနှင့် ပတ်သက်သည်များကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရေအများစုသည် ပင်လယ်ထဲတွင်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေသည် ငန်သည် အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၎င်းတွင် ဆားအပါအဝင် ဓာတ်သတ္တုများစွာပါဝင်သည်။ ဇီဝရုပ်များစွာသည် ဆားငန်းရေတွင် ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်နိုင်ပြီး များစွာ မျိုးပွားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း တစ်ချို့သာ သန့်ရှင်းသော ရေပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သာနေထိုင်နိုင်ကြသည်။ လူသားများသည် ဆားငန်ရေထက် သန့်ရှင်းသောရေကို ပို၍လိုအပ်သည်။ သန့်ရှင်းသောရေကို ကုန်းမြေမှ အများစုရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် လူသားတို့နေထိုင်သည့် ကုန်းမြေတိုင်းသည် သန့်ရှင်းသောရေအရင်းအမြစ် မရှိပေ။ ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးဧရိယာများသည် ဆားငန်ရေ များပြားစွာရှိသည် သို့သော် သန့်ရှင်းသောရေရရှိရန် ခက်ခဲစွာရှာရသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆားငန်ရေကို သန့်ရှင်းသောရေအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား?
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဆားငန်ရေကို သန့်ရှင်းသောရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်ကိုသာ အဓိကထားလုပ်ဆောင်မည်။ ဤစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွင် ကျောင်းသားများသည် အရည်အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း အယူအဆဖြင့် ဆားငန်ရေမှ သန့်ရှင်းသောရေသို့ ပြောင်းလဲရန် သုံးနိုင်သောစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့လေထု ၁ ရှိ ရေ၏ ရေဆူမှတ်မှာ ၁၀၀° C။ သို့သော်လည်း ရေသည် ၁၀၀°ရောက်တိုင်း အငွေ့ပြန်ရန် စတင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ရေငွေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်စဥ်သည် ၁၀၀°အောက်တွင်တောင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဆားကို ရေမှ ရေငွေ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် ဖယ်ရှားမည်။ ၁၀၀° အောက် အပူချိန်တွင် ဆားသည် ထင်ရှားစွာ ရေငွေ့မပြန်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆား၏အရည်ပျော်မှတ်သည် ၈၀၀°သို့ရောက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀°အောက်တွင် ရေငွေ့ပြန်ခြင်းဖြင့် ဆားကို ရေမှဖယ်ရှားနိုင်သည်။ရေကို ပွက်ပွက်ဆူစေရန် မီးသို့မဟုတ် နေရောင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေငွေ့သည် အေးသောမျက်နှာပြင်နှင့်ထိတွေ့ပြီး ထည့်ထားသည့်ခွက်အတွင်းသို့ ကျဆင်းသွားသည့် အတောအတွင်း အအေးခံခြင်းဖြစ်စဥ်အားဖြင့် ရေ မှရေငွေ့သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရေငွေ့များကို
ပူနွေးစေခြင်းသည် အရည်မှအငွေ့ အဆင့်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုနားလည်စေခြင်း။
ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းသည် ရေ‌နွေးငွေ့ မှ အရည်အဖြစ်သို့ အအေးခံခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည် ကိုနားလည်စေခြင်း။
ရေငွေ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့် ရေ နှင့်ဆားကို ခွဲခြားနိုင်ကြောင်းနားလည်စေနိုင်ခြင်း။ နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွင် ဆားငန်ရေကို ခွဲခြားသည့်နည်းလမ်းကို အကောင်ထည်ဖောင်ခြင်း။
ဆားငန်ရေ ရေငွေ့ပြန်အောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
ရေငွေ့ကို မည်ကဲ့သို့ ဖမ်းပြီးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သနည်း။
ရေငွေ့ကို အရည်ပြန်ဖြစ်အောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ အပူ သို့မဟုတ် အအေး သုံးခြင်းဖြစ်မလား? အဘယ်ကြောင့်နည်း?
4ဆားငန်ရေကို အပူပေးနိုင်ရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောက်လုပ် တည်ဆောက်မည်နည်း? ရေနွေးငွေ့ကို မတူညီသော ခွက်ထဲ၌မည်ကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းထားမည်နည်း?